नेपालमा सुन्तला खेति प्रबिधि - Yohosamachar
सुन्तला जात फलफूल भन्नाले बोक्रामा तेल भरिएको ग्रन्थीहरु भएको र फल भित्र केस्रा र केस्रा भित्र स(साना रसले भरिएको थैलीहरु भएको फललाई जनाउंछ । नेपालमा मुख्यतया खेति गरिने सुन्तला जात फलफूलहरुमा सुन्तला , जुनार , कागती , निबुवा, मौसम , ज्यामिर , भोगटे , विमिरो आदिलाई जनाउंछ । क्षेत्र र उत्पादनक हिसावले सुन्तला जात विश्वमा तेस्रो स्थान ओगटेको छ भने नेपालमा प्रथम स्थान ओगटेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउछ ।
हावा पानी :
सुन्तला फलफूललाई समष्टीगत रुपमा उपोष्ण फल भनिए पनि सुन्तलाका केही जातलाई उष्ण हावापानीमा पनि सफलताका साथ खेती गर्न सकिन्छ भने यी जातहरु १६०० मी. उचाईसम्म सजिलै खेती गर्न सकिन्छ । नेपालको मध्यवर्ती पहाडी क्षेत्रमा यस किसिमको हावापानी पाईन्छ । सुन्तला उत्पादन गर्न, विरुवा उत्पादन गर्नको लागि १००० मी. भन्दा कम हुनु हुदैन । सुन्तला उत्पादनकोलागि उपयुक्त उचाई १०००–१२०० मी. मानिन्छ । सुन्तलाको लागि ५० से – ४० ० से सम्मको तापक्रम राम्रो मानिन्छ भने उपयुक्त तापक्रम १९० से को आसपासलाई मानिन्छ । वार्षिक वर्षाको हकमा ९५० मी.मी. –२००० मी.मी.उपयुक्त मानिन्छ । सूर्यको प्रकाश ८–११ घण्टा प्रति दिन राम्रो मानिन्छ ।
माटोको गहिराइ १ मिटरभन्दा बढि (ढुंगा नभएको), हलुका दोमट र प्राङ्गारिक पदार्थयुक्त, पानी नजम्ने खालको माटो यस खेतीको लागि उपयुक्त मानिन्छ । माटोको रासायनिक गुण यसको अम्लियपना (पि.एच.) लेबलले जनाउँछ र (पि.एच.) ६.५ को आसपास हुनुपर्दछ ।
यो पि.एच. लेबल भन्दा बढि भएमा बिरुवाले शुक्ष्म पोषक तत्वहरुको प्राप्त गर्ने शक्ति ह्रास हुन्छ र कम भएमा चुन र म्याग्नेसियम जस्ता खनिज तत्वहरु बढि घुलनशील भई बगेर जान्छ । कृषि चुनको सहायताले माटोको पि।एच। लाई बढाउन सकिन्छ । माटोमा लवण (नुनिलोपना) को मात्रा कम भएमा राम्रो मानिन्छ ।
बिरुवाको छनोट :
ठाउको र जग्गाको छनोट :
बगैचा लगाउने ठाउको छनोट गर्दा निम्न कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्दछ :
पर्याप्त पानी उपलब्ध (सिंचाई सुविधा)हुनु पर्दछ ।
बगैचाको रेखांकन :
खेती गरी राखेको बारीमा जग्गाको तयारी वा सुधारको जरुरत पर्दैन । बारीमा रहेका सबै वुट्यान, झाडी, मुढाहरु भए सफा गरेर जलाउनु पर्दछ । ठूला चट्टानहरुलाई हटाई सफा गर्नु पर्दछ । खेती नगरीएको भिरालो जमीनमा बगैंचा स्थापना गर्नु पर्दा गह्रा गह्रा बनाउनु पर्दछ । सिंचाई र निकासको लागि सुहाउँदो कुलो÷कुलेसो बनाउनु पर्दछ । बगैंचाको सुरक्षाको लागि समुचित रुपले बार बन्देज लगाउन पर्दछ । ९यसको लागि सुविधा अनुसार काँडेतार, ढुङ्गा(ईटको पर्खाल, जिउँदो झाडीदार, विरुवा निलकाँडा आदि० । तेजलो हावा चल्ने ठाउँ भए छिटो बढ्ने खालका वायु अवरोधक रुख विरुवा लगाउनु पर्दछ ।
खाडलको तयारी :
जग्गा रेखंकन भै सकेपछि तोकिएको ठाउमा बिरुवा रोप्नु भन्दा ९३०-४०० दिन अगाडी १ह्१हह्१ मिटर लम्बाई, चौडाई र उचाईको खाडल खन्नु पर्दछ । खाडल खण्ड माथिल्लो ५० से.मि. को माटो अलग थुप्रो र तल ५० से.मि.को माटो अलग थुप्रो बनाउनु पर्दछ ।
खाडल पुरै खनी सकेपछि १५-२० दिन त्यसै खाली रहन दिने र त्यसपछि प्रति खाडल २-३ डोका गोबरमल , खरानी २ के जी हाडको धुलो २ किलो , २०० ग्राम युरिया , २०० ग्राम डी.ए.पी र २५० ग्राम पोटासमल र माथिल्लो ५० से.मि.को माटोको थुप्रोसंग राम्रोसंग मोली खाडलमा राख्दै खुट्टाले थिच्दै जाने र खाडल जमिनको सतह भन्दा करिब १०-२५ से.मि.माथिसम्म माटो र मलले भर्ने अनि खाडलको बिचमा एउटा काठको लट्ठी राख्ने । पछि त्यही लट्ठी निकाल्ने र निकालेको ठाउमा बिरुवा लगाउने ।
विरुवा रोप्ने दुरी :
विरुवा रोप्ने समय :
बगैचा ब्यबस्थापन :
बिरुवा रोपेर मात्र हुँदैन , यसबाट राम्रो फल उत्पादन गर्न बगैचाको राम्रो संग हेरचाह गर्नु पर्दछ । बगैचाबाट छिटो र बढि फाइदा लिनको लागि छिटो हुर्काउनु जरुरी छ। यसको लागि गोडमेलरमलजल । छापो । बिरुवाको तालिम तथा काटछाँट , सिंचाई तथा जल , बाली संरक्षण आदिमा राम्रो ध्यान दिनु पर्दछ ।
सुन्तलामा उत्पादनमा चिस्यानको ठूलो भूमिका हुन्छ र चिस्यान कायाम राख्न एवं झारपात नियन्त्रण गर्न सुन्तला लाई छापो दिन अनिवार्य छ । बिरुवा रोपेपछि सुकेको घाँस, पराल वा कालो प्लास्टिकको छापो दिन सकिन्छ । छाप्रो दिदा बिरुवाको फेदलाई सिधै नछुने गरी वरीपरी लगभग २-३ इन्च बाक्लो दिनुपर्छ ।
सिंचाईको महत्व :
आद्र वा उप–आद्र जलवायुमा पनि लामो सुख्खा ९नाजुक० समयमा पानीको कमीले –
सिंचाईको आवश्यकताको अनुमान :
सिंचाई तरिका :
बेसिन प्रणाली :
रिंग प्रणाली :
नयाँ र फल्नु अघिका वोटहरुलाई मलखाद दिने तरिका :
फलेका बोटहरुलाई मलखाद दिने तरिका:
फलेका रुखहरु आफ्नो पोषण र उच्च उत्पादन दुबैको लागि धेरै मात्रामा पोषकतत्वहरुको उपयोग गर्दछन् । माटोबाट पोषकतत्वहरुको धेरै मात्रामा फलद्धारा निम्न क्रममा खर्च गरिन्छ । क्रमशस् पोटास, चुन, नाइट्रोजन र फोसफोरस सबभन्दा कम । रुखको स्वास्थ्य र उत्पादनलाई कायम राख्न निम्न कुराहरुलाई ध्यानमा राखी मलखाद हाल्ने कार्यक्रम तयार गर्नुपर्दछ स् रुखको आकार, उमेर र उत्पादन, चुनको मात्रा माटोको प्रतिक्रिया (पी.एच.) र उर्बराशक्ति , खेती गरिने पद्धति ।
माटोमा हाल्ने :
नयाँ बोटलाई मल हाल्ने तरिका :
बिरुवा नजिक करीब ३०–४५ से.मी.ब्यास (गोलाई) लाई छोडेर वरपरको माटो हलुका रुपमा खनिन्छ । मल हालिने ठाउँ बिरुवाले ढाकेको (ओगटेको) थानभन्दा चौडा हुनुपर्दछ । बोट बढदै गए अनुसार मल हालिने स्थानको चौडाई बढाउदै जानुपर्दछ । मसिनो पारिएको मलखाद खनेको माटो माथि छरेर गोडमेल गरी राम्रोसँग मिसाउनु पर्दछ ।
फलेको बोटलाई मल हाल्ने तरिका :
मल हाल्दा अपनाउनु पर्ने साबधानी :
फेदबाट टाढा गरी मलखाद हाल्नुपर्दछ फेदको सम्पर्कमा आउँदा हानी हुन्छ र मल उपयोग गर्ने मसिना जरा फेद नजिक हुदैनन् ।
सुन्तलाको फेद कुहिने रोग :
यो रोग फाइटोफ्थोरा नामक ढुसीको कारणले लाग्दछ । खास गरी १०० मीट र भन्दा कम उंचाईमा भएका बगैंचाहरुमा यो समस्या बढी देखिन्छ । शूरु शूरुमा यो रोग लागेमा सून्तला बोटको फेद वरिपरिका बोक्रा चर्किन्छन् र खैरो भई कूहिन्छन् साथै बोक्रा खूइलिएर फेदको भित्री भाग देखा पर्दछ । बिस्तारै पातहरु पहेंलिएर झर्न थाल्दछन् । हांगाहरु सूक्दै जान्छन् । यो रोग खासगरि बर्षा याममा देखा पर्दछ । फुटेको बोक्राबाट गूंद ररस निस्कन्छ । रोग माथितिर बढदै गई अन्तमा पूरै बोट मरेर जान्छ ।
सुन्तलाको खराने धुलेर ढुसी रोग :
सल्फेक्स ९गन्धक ८० देखि ९० प्रतिशत ० १५ देखि २० केजी प्रति हेक्टर धूलो छर्कने वा २० ग्राम प्रति १० लीटर पानीमा घोली फुल फूल्नू अगावै माघमा १ पटक र फल लागेपछि चैत्र बैशाखमा १ पटक छर्ने ।
क्याराथेन ९डाइनोक्याप०-५ देखि ८ ग्राम प्रति १० लीटर पानीमा मिसाई पालूवा माथि १० दिनको फरमा २-३ पटक छर्कने ।
← केरा खेती गर्ने तरिका
खेलकुदको महत्व निबन्ध →
Total Visit : 14243